Covid-19 ကာ ကွယ်ဆေး အတွက် နောက် ဆုံးတွေ့ရှိ ချက် များ – Let Pan Daily
Covid-19 ကာ ကွယ်ဆေး အတွက် နောက် ဆုံးတွေ့ရှိ ချက် များ
Covid-19 #ရော ဂါကာကွယ်ဆေးဟာ အလုပ်ဖြစ်နိုင်ပြီး #ရောဂါကူး စက်ဖူးသူဟာရောဂါပြန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်မရှိဘူး လို့ မျောက်တွေနဲ့စမ်းသပ်ရာမှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ 🇺🇸 အမေရိကန်ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေက Covid-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီး မျောက်တွေကိုစမ်းသပ်တွေ့ရှိထားတဲ့ သတင်း နှစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ #နံပါတ်(၁) 🐒 မျောက်9ကောင်ကို Covid-19 ဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ ရောဂါကူးစက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။
သူတို့ကို ရောဂါဖြစ်နေရာကနေ ပြန်နေကောင်း လာအောင်စောင့်တယ်။ သူတို့ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါမှာ ရောဂါပိုးနဲ့ထပ်ပြီးထိတွေ့ပေးလိုက်တယ်။ 🐒 အဲ့ဒီမျောက်တွေမှာ #နေမကောင်းထပ်မဖြစ်တော့တာကိုတွေ့ရတယ်။
👉 သဘောက ရောဂါဖြစ်ဘူးလို့ သဘာဝကိုယ်ခံ အားရသွားရင် နေမကောင်းပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ မှန်းဆနိုင်တယ်။ 👉 ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးထားလို့ ကိုယ်ခံအားလုံလုံလောက်လောက်ရထားရင်လည်း နေမကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ မှန်းဆနိုင်တယ်။ 👉 မှန်းဆနိုင်တယ်လို့ ကျနော်ရေးရတာက မျောက်မှာစမ်းသပ်အောင်မြင် ထားတာပဲ ဖြစ်ပြီး လူမှာစမ်းသပ်နေတုန်းမို့လို့ပဲ။ အခုစမ်းသပ်မှုကို Harvard တက္ကသိုလ်ရဲ့ Beth Israel Deaconness Medical Center က ရောဂါပိုးမွှားနှင့် ကူးစက်ရောဂါဌာနက Dr. Dan Barouch တို့အဖွဲ့က စမ်းသပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။
Dr. Dan Barouch တို့က အင်မတန်ကောင်းတဲ့သတင်းလို့ ဆိုထားတယ်။ အရင်က ဒါမျိုး မစမ်းသပ်ရသေးဘူး။ “ဟာ…. ခင်ဗျားတို့ကလည်းဗျာ…. များများစမ်းသပ်ပါလားဗျ။ ကျနော်သာဆို တလက်စတည်း စမ်းမယ်။ အခုဟာက 1 ပတ်ကို report 1 ခုလောက်ထွက်နေတယ်။
ကိုရီးယားကား အခန်းဆက်ကြည့်နေ ရသလိုပဲ။ ဟိုဟာတွေ့လိုက် ဒီဟာတွေ့လိုက်နဲ့။ လိုရင်းကို မရောက်နိုင်ဘူး။” “မလွယ်ဘူးဖိုးခင်” “မျောက်ကလိုသလောက်မရဘူးကွ။ ဒီမှာ ရစ်ချတ်… မင်းလာအစမ်းခံမလား။” “စမ်းသပ်တာက လွယ်တယ်မှတ်လို့ ပိုးတွေအပြင်မပြန့်သွားအောင် ထိန်းသိမ်း ရတာ နေရာ အခက်အခဲနဲ့ အခြားကန့်သတ်ချက်တွေ ဘာညာရှိသေးတယ်။” “ဒါလဲ ဟုတ်တာပဲနော်။” “ကိုယ့်ဟာကိုယ်သူများတွေ့ရှိချက်တွေကို အေးဆေးထိုင်ရေးနေစမ်းပါကွာ။ လျှာမရှည်နဲ့။ ဒီမှာက အသက်နဲ့ရင်းလုပ်နေရတာ။ တိရိစ္ဆာန်ချစ်သူများအဖွဲ့က အော်မှာလည်း စိုးရိမ်ရသေးတယ်။ နောက်နောင်လျှာရှည်တဲ့ကောင်တွေရယ်။ သတင်းရေးတာကို ဟိုဟာဖြစ်တယ် ဒီဟာဖြစ်တယ် ဝေဖန်တဲ့ကောင်တွေရယ် လက်တွေ့လာအစမ်းခံ။
လျှာရှည်တဲ့ကောင်တွေကို ငါတို့ဆီလွှတ်လိုက်။ လက်တွေ့သိ သွားမယ်။ ဒါပဲ။” “ဟုတ်ပါပြီ။ ဒုတိယစမ်းသပ်ချက်ပဲ ဆက်ရေးတော့မယ်။ ထပ်သိချင်ရင် Dr. Dan Barouch တို့ဆီသွား။” 😒 #နံပါတ်(၂) 🐒 Dr. Dan Barouch တို့ အဖွဲ့ကပဲ မျောက် 25 ကောင်ကို ကာကွယ်ဆေ6းမျိုးနဲ့စမ်းတယ်။ 💉 Six prototype vaccines ကို ကာကွယ်ဆေး မျိုးကွဲ6မျိုးလို့ ယူဆတယ်။ တစ်မျိုးထဲ6လုံးတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့ကောင် 25 ကောင်နဲ့ မထိုးထားတဲ့ကောင် 10 ကောင်ကို SARS-CoV-2 လို့ခေါ်တဲ့ Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ ထိတွေ့ပေးလိုက်တယ်။ ဘယ်လိုခွဲသိလဲဆိုတော့ နာမည်ကပ်ပေး ထားပေါ့။ xue meemee ဘာညာ။ ကိုယ်သာဆို 🐒 မျောက်တွေကို friend lists ထဲကလူတွေ နာမည်ပေးထားမှာ။
အဲ့ဒီမှာ ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့ 10 ကောင်စလုံးရဲ့ အဆုတ် နဲ့ နှာခေါင်း ထဲမှာ ရောဂါပိုးအတော်ကြီးကို ကူးစက်နေတာတွေ့ရသတဲ့။ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့ မျောက်တွေမှာ လုံလောက်တဲ့ ကာကွယ်မှုရတာကိုတွေ့ရတယ်။ မျောက် 8 ကောင်မှာ အပြည့်အဝကာကွယ်မှုပေးတာတွေ့ရတယ်။ အဲ့မျောက် 🐒 8 ကောင်က ကျန် 17 ကောင်နဲ့ ဘာကွာသလဲမပြောထားဘူး။ 🐒 “We sawasubstantial degree of protection for vaccinated animals. Eight of the vaccinated animals were completely protected. ” တဲ့။
ပြီးတော့ သူတို့စမ်းသပ်တဲ့6မျိုးက တစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုးဘာကွာလဲလည်း မပြောဘူး။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက -ခေါင်းကျယ်တယ်အဲ့လိုပဲ။ ပြောချင်မှပြောတာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် – ♦️ရောဂါကာကွယ်ဆေးသာရရင် ရောဂါကူးစက်ခံရဖို့ အခွင့်အရေးနည်းတယ်။ ♦️သို့တည်းမဟုတ် ကြားထဲမှာ ကူးစက်ခံရပြီး ပြန်ကောင်းလာရင် ထပ်ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းနည်း ပါးတာတော့သေချာတယ်။ လူမှာစမ်းသပ်ပြီးမှ အသေအချာပြောလို့ရမယ်။
ဒါနဲ့ကြုံတုန်းပြောလိုက်အုံးမယ်။ Oxford တက္ကသိုလ်က ကာကွယ်ဆေး “ChAdOx1” ကိုသိတယ်မလား။ ကျနော်ကတော့ Oxford ကဆေးကို သမားရိုးကျဆိုပေမယ့် အထင်ကြီးတယ်။ ဟိုတလောက သူများတွေက Fail ဖြစ်တယ်လို့ ထအော်တဲ့ဆေးလေ။ အဲ့ဆေးကို AstraZeneca က dose ပေါင်း 1 ဘီလီယံထုတ်ဖို့ပြင်နေကြောင်း မနေ့က ကျနော်ကာကွယ်ဆေး post ထဲမှာရေးခဲ့ပါတယ်။ ညကသတင်းထဲမှာ အမေရိကန်အစိုးရက အဲ့ဒီ 1 ဘီလီယံထဲက သန်း 300 ကိုဝယ်ယူဖို့ ပြောထားလိုက်ပါပြီတဲ့။ အမေရိကန်ရဲ့ လက်မြန်ချက်။
မိနျးမ ဟူသမြှ ဖနျတနျတနျ ပါ ပဲ ပုဏ်ဏားကွီး ရယျ